မိုးကောင်းကင်: April ၁ ရက်နေ့မှာ ဧပရယ်လ် ဖူးလ် အလုပ်မခံကြရအောင်လို့
April ၁ ရက်နေ့မှာ ဧပရယ်လ် ဖူးလ် အလုပ်မခံကြရအောင်လို့
ဒီဧပရယ်လ် ဖူးလ်နေ့ အကြောင်းလေးကို အရင်ကျောင်းသားဝကတုန်းက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဧပရယ်လ် ဖူးလ် အလုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးကို အရင်နှစ်က ဧပရယ်လ်ဖူးလ်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ ရေးပြီး တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ဒီနှစ်လည်း ဒီပို့စ်လေးကနေမှ သူငယ်ချင်းတွေကို ဧပရယ်လ်ဖူးလ် အလုပ်မခံရအောင်လို့ ဧပရယ်လ်တစ်ရက်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ ကြိုတင် ပြီးတော့ အမှတ်ရစေအောင်လို့ ပြန်လည် ဆားချက်လိုက်ရပါတယ်..............။
ဧပရယ်လ် တစ်ရက်နေ့ကို ဧပရယ်လ် ဖူးလ် နေ့ လို့လူသိများကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဧပရယ်လ် တစ်ရက်နေ့ကို ရောက်တော့မှာဆိုတော့ အဲဒီ နေ့မှာ ဧပရယ်လ်ဖူးလ် အလုပ်မခံကြရအောင်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့သို့လာရောက် လည်ပတ် ၊ စာဖတ် အားပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ ကို့  ကြိုတင် သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဧပရယ်လ် ဖူးလ် အလုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းလေး ကို ရေးဖွဲ့ ပြီးတော့ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
" ကိုဇော်တို့ ၊ ကိုဂေါက်ကြီးတို့ ဖုန်း လာတယ် " ဆိုတဲ့ အဆောင် မှူး ရဲ့ ခေါ်သံကြောင့် ရေမချိုးသေးပဲ ဖုန်းသွားကိုင်လိုက်ပါတယ်။
"ဟဲလို… အမိန့်ရှိပါခင်ဗျာ…" ဒီလို "ဟဲလို အမိန့်ရှိပါခင်ဗျာ".. ဆိုတာကတော့ ဖုန်းလာရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြန်ထူးတက်တဲ့ အကျင့်မို့ပါ။ ခဏနေတော့ … တစ်ဖက်က မိန်းကလေး ရဲ့ အသံထွက်လာပါတယ်.. ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ အသံပါ။
"အမိန့်ရှိပါ လုပ်မနေနဲ့ ကျွန်တော် မိသိမ့်ပါ။.."
" အေး ပြော မိသိမ့်၊ နင်တို့က ဘာပြောစရာ ရှိလို့ လဲ ၊ အခုမှ ငါတို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေ လမ်းခွဲ လာတဲ့ ဟာကို "
"`ဟုတ်တယ် ။ အဲဒီ ခင်ဗျား တို့ နဲ့ လမ်း ခွဲပြီးတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်က အဆောင် မပြန်ချင်သေးတာရယ်၊ မိုးရွာထဲမှာ ဆိုင်ကယ် လျှောက်စီး ချင်တာ နဲ့ ပဲ ဆိုင်ကယ် လျှောက်စီးကြတာလေ… အခု ဆိုင်ကယ် တိုက်ခံရလို့"
"ဟေ.. ဟုတ်လား နင်တို့ ဘာဖြစ်သွားကြသေးလဲ "
" တော်တော် ဖြစ်တာလား? ဘယ်နားမှာ တိုက်တာလဲ.. မိသီ ကရော ဘယ်လိုနေလဲ… ? "
"ဟုတ် ပြောမှာပေါ့.. ခင်ဗျားကကြည့်ပဲ မေးနေတော့ ကျွန်တော်က .. ဆိုင်ကယ် အတိုက်ခံထားရလို့ တုန်နေလို့ စကား မပြောနိုင်ရတဲ့ အထဲ… ဘယ်က စပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး "
" အင်း ဟုတ်သားပဲ ပြော"
"ကျွန်တော်တို့ လမ်းသုံးဆယ် ပေါ်က မန်းမြို့တော် နားလေး မှာ တိုက်ခံရတာပါ။ ဆိုင်ကယ် နှစ်စီး တိုက်မိတာ ။ မိသီ ကတော့ တော်တော် များတယ် ဒဏ်ရတာ ၊ ကျွန်တော်လည်း တကိုယ်လုံး ပွန်းပဲ့ကုန်တယ် ဒဏ်ရာတွေက။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အခု ချက်ခြင်း လာခဲ့ကြအုံး။ "
"အေး … ငါတို့ အခု လာခဲ့မယ်လေ.. ၊ အခု အဲဒီ မန်းမြို့တော်နားမှာ ပဲလား"
"ဟုတ်တယ် အခုတော့ မန်းမြို့တော်ရှေ့မှာပဲ ရှိသေးတယ်… ။ တစ်ဖက်က တိုက်တဲ့ သူတွေ လည်း ဒဏ်ရာတွေက တော်တော်လေး များတယ်။ အဲဒါ အခု သူတို့ရောပဲ ဆေးရုံကြီးကိုတော့ သွားဖို့ လုပ်နေကြတယ်။ "
"အေး .. အေး ငါတို့ အခုချက်ခြင်း အဲဒီလိုက်ခဲ့မယ်လေ.. နော်. "
" ဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့ ကို မန်းမြို့တော်ရှေ့  မှာ မတွေ့ ရင် ဆေးရုံကြိးထဲ လိုက်ရှာကြည့်လိုက်နော်… ဆေးရုံကြီးကို အခု သွားကြမှာ.."
" အေး ပါဟာ.. ငါတို့ မန်းမြို့တော် ရှေ့ တိုက်တဲ့ နေရာ ကို အရင်လာခဲ့ပါမယ်.. တကယ်လို့ အဲဒီမှာ မတွေ့မှ ဆေး ရုံကြီးထဲ ကို လိုက်ခဲ့မယ်နော်…."
"ဟုတ်အကို .. အခု ချက်ခြင်း လာခဲ့နော်..။ ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်…"
" အေး အေး…​ချလိုက်လိုက်တော့" လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ်။
"ညီလေး ရေ.. ခဏ"
" ဟုတ် အကို ပါဆယ် ထည့်မှာလား အကို.. ကြက်သားနဲ့လား ? ၀က်သားနဲ့လား ? ဘယ်နှလုံး လုံး ယူမလဲ အကို" ဆိုပြီး မန်းမြို့တော် ပေါက်ဆီ ဆိုင်ထဲက ညီလေးက စကားတွေကို ပြန်ပြောနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပဲ… ကိုယ်မေးရမယ့် စကား ကို ဆက်ပြီး မေးရပါတယ်။
"ညီလေး ရေ.. အကိုက ကြက်သား လည်း မ၀ယ်သေးဘူး။ ၀က်သား ပေါက်ဆီလည်း မ၀ယ်သေးဘူး၊ အကို မေးစရာ ရှိလို့ "
" ဟုတ်အကို ဘာမေး မလဲ .. မေးလေ.. " ဆိုပြီး ညီလေး က ပြန်ပြောပါတယ်။
"ဒီဆိုင်ရှေ့မှာ လေ.. စောစောက ဆိုင်ကယ် နှစ်စီး တိုက် တယ် ဆိုလို့ အဲဒါ … ဒီနားမှာ ဖြစ်တာ လား၊ သိချင်လို့ ပါ ညီလေး.."
" ဟာ.. အကိုက လည်း ဒီရှေ့မှာ ဘာဆိုင်ကယ် မှ မတိုက်ပါဘူး ဗျ… ၊ တကယ်လို့ တိုက်ကြရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ သိမှာပေါ့ဗျ…"
"ဟေ.. ဟုတ်လား၊ ဒါဆို ဒီရှေ့မှာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့"
`ဟုတ် အကို.. ဒီရှေ့ မှာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ၊ ပုံမှန်ပဲ သွားလာနေကြတာ ပါ"
"အေး..အေး။ ကျေးဇူးပဲ နော်ညီလေး၊ အကိုတို့ က အကိုတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဒီရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ် အတိုက်ခံ ရတယ် ပြောလို့ လိုက်လာတာကွ၊ အခုတော့ .. ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆိုတော့ တို့ တော့ ဘက်ခံ ရပြီလား မသိပါဘူး ကွာ….၊ "
"သွားမယ် နော် ညီလေး"
"ဟုတ် အကို "
" ဂေါက်ကြီးရေ.. ဒီကောင်မလေး တွေ ၊ သူတို့ ပြောတာ တော့ မန်းမြို့တော် ပေါက်ဆီ ဆိုင်ရှေ့မှာ မတွေ့တော့ ရင် ဆေး ရုံကြီးထဲကို လိုက်ခဲ့လိုက်လို့ တော့ ပြောတယ်ကွ.. ။ ဒါကြောင့် သူတို့ ဆေးရုံ ကြီးထဲ များ ရောက်နေကြလား မသိဘူး ။ တို့ ဆေး ရုံကြီးထဲ လှည့်ပတ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကွာ၊ တကယ်လို့ ဆေးရုံကြီးထဲမှ မတွေ့ဘူး ဆိုရင်တော့် သူတို့ အဆောင်လိုက်သွားကြတာပေါ့။ သူတို့ အဆောင်ရောက်ရင်တော့ အကျိုးအကြောင်း သိရမှာပဲ။ "
" ဟုတ် ကိုဇော် ဆေး ရုံထဲ သွား ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ.။ မတွေ့မှ သူတို့ အဆောင်လိုက်သွားကြတာပေါ့။" သူငယ်ချင်းဂေါက်ကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့အဆောင်ရှေ့ရောက်တဲ့ အခါမှာ.. သူတို့ အဆောင်ကို အရိပ်အခြေ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်း ။ လူသူ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ဘူး ဆိုတော့ ။ "သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုင်ကယ် တိုက်ခံရတယ် ဆိုတာ ဟုတ်များဟုတ်နေမလားပေါ့။ ဆေး ရုံကြီးကိုမသွားချင်လို့ တခြား အပြင် ဆေးခန်း များ သွားကြတာလား မသိဘူး။ . အဆောင်မှူး ကိုလှမ်းခေါ် ကြည့်အုံးမှ ပဲ ဆိုပြီး… လှမ်းခေါ်မလို့ အဆောင် အပေါက်ဝနားကို နှစ်ယောက်သား လိုက်တဲ့အခါမှာ.. ထင်မှတ်မထား တဲ့ အပြုအမူ မျိုး အလုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်…."
"ဗွမ်း…. .. ဟာ… "
"နင်တို့ ဆိုင်ကယ် တိုက်တယ် ဆိုတာ တကယ် မဟုတ်ဘူးလား.." လို့ ကျွန်တော်က မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ.. သူတို့ နှစ်ယောက်က ရယ်မော နေတဲ့ကြားပဲ.. ဆက်ရယ်ပြီးတော့…..
"တကယ် မတိုက်ပါဘူး ဗျ….. "
"ဟင်.. ဒါဆို နင်တို့ က… ……….. ငါတို့ ကို…"
"ဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက်က .. ခင်ဗျား တို့ နှစ်ယောက်ကို ဧပရယ် ဖူးလ်လုပ်လိုက်တာ လေ… "
သူတို့က ကျွန်တော်တို့ ကို.. ဧပရယ်ဖူးလ် လုပ်လိုက်တာလို့သာ ပြောတာ..ကိုယ်တို့က အဲဒီအချိန်တုန်းက ဧပရယ် ဖူးလ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း မသိသေးတော့…. ဧပရယ်ဖူးလ် ဆိုတာက ကြားယုံပဲ ကြားဖူးတာ။ တခါမှ လည်းအလုပ်မခံရဖူးတော့ နည်းနည်း တော့ စိတ်တို သွားတာပေါ့လေ.. အခုလို ခံရတာ လည်း ခံသင့်ပါတယ်လို့ ပဲ ဖြေဖျောက်လိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်္ကြန် မရောက်ခင်မှာပဲ… ရေက အလောင်း ခံလိုက်ရသေး… ။
"အေးပေါ့ ဟာ. နင်တို့က တော့ ငါတို့ ကို ဧပရယ် ဖူးလ် လုပ်လိုက်ရလို့ ရယ်မော နေနိုင်ပေမယ့် … ငါတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ နင်တို့ နှစ်ယောက် တကယ် ဆိုင် ကယ်အတိုက်ခံရတယ်ထင်ပြီး အပြေးအလွှားနဲ့ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာလိုက်တာ.. ကိုယ့်ဆိုင်ကယ် ဒေါက် တောင် မတင်မိလို့ လမ်း မှာ ငါတို့ မလဲတာ ကံကောင်း တယ်…" လို့ ဆိုပြီး ဂေါက်ကြီးက စိတ်တိုတိုနဲ့ ပဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကလည်း
"စိတ်မဆိုးရဘူးနော်. .. ကျွန်တော်တို့က ဒါ ပျော်လို့ ဧပရယ်ဖူးလ် လုပ်လိုက်တာနော်….၊ ပျော်ရအောင်လို့ လုပ်လိုက်တာပါ။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.." လို့ ပြောပြီး သူတို့က ပြန်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ အဆောင်မှာပဲ ဖျော်ရည် တွေ ဖျော်ပြီး ကျွန်တော်တို့  ကို ဖျော်ရည်တိုက်ပြီး ကျေအေးဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ လည်း အဲဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေအေးခဲ့ရပါတော့တယ်…။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ဧပရယ် ဖူးလ် ဆိုတဲ့ ဧပရယ် တစ်ရက်နေ့ဆိုတာ ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အမှတ်ရစေ မိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဧပရယ်ဖူးလ် နောက်ထပ် အလုပ်မခံ ရအောင် အမြဲ သတိ နဲ့ နေနေမိပါတော့ တယ်။ ဒီလို နေနေတဲ့ ကြားက ပဲ…. တခါလေ… အမှတ်မထင်နဲ့ပဲ ဧပရယ် ဖူးလ် အလုပ်ခံ လိုက်ရပါသေးတယ်။
ဒီပို့စ် ကိုရေးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ အခုလို ဧပရယ် တစ်ရက်နေ့မှာ ဧပရယ်ဖူးလ် လုပ်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကို ပြန်လည် အမှတ်ရစေတဲ့ အပြင် ကိုယ့်နယ်ကိုယ့်ဒေသတွေသို့ အသီးသီးပြန်သွားကြပြီး နေထိုင်စားသောက်လုပ်ကိုင်နေကြသော သူငယ်ချင်း များ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသော သူငယ်ချင်းများအား… သတိတရ အနေနဲ့ ရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်… ။
နောက်ပြီး ဒီပို့စ်လေးမှာ ပါဝင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော ဘရူနိုင်းသို့ ရောက်နေသော သူငယ်ချင်း မိသိမ့် နှင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြက်နေသော သူငယ်ချင်းဂေါက်ကြီးတို့ မိသီတို့အားလုံးကို ပြန်လည်သတိရသော အားဖြင့် ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်လည်ရှာဖွေပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 12:54 PM
သတိပေးလို့ ကျေးကျေးပါအန်ကယ်ရေ့း)
April ၁ ရက်နေ့မှာ ဧပရယ်လ် ဖူးလ် အလုပ်မခံကြရအောင်လု...